Logo Custom China Long Sleeve Women'S Hoodie PY-WW003 Soosaarka iyo Warshadda | Pinyang
Daabacaadda Galmada Isboortiga Gaaban Haweenka T-Shirt PY-D ...
Jimicsiga Jimicsiga Dumarka dhaadheer ee T-Shirt PY-CT002
Astaanta Astaanta Gaarka ah ee Haweenka 'Hoodie PY-WW003'
100% Suufka Gacanta Gaaban Gaaban T-Shirt PY-ND004
Midab adag oo funaanad jilicsan ragga iyo dumarka lammaane laba funaanad caadadiisu daabacan tahay hoodie
Maro noocee ah ayaa loo doortaa naqshadeynta funaanadaha jiilaalka? Aqoonta dharka loo habeeyay Hoodie
Hoodie loo habeeyay, waxaa jira dhar kala duwan oo aan ka dooran karno suuqa, laakiin noocee ah dharka Hoodie ayaa dhidid badan dhuuqa oo neefsada? Tilmaaminta Naadiga ayaa kugu qaadan doonta inaad fahamto xaaladda dharka Hoodie ee suuqa.
Dharka dharka lagu qurxiyo ee dharka - dharka cashmere
Cashmere lafteedu maaha erey caadi ah, laakiin waa magac inta badan loo isticmaalo ganacsiyada. Sababta loogu magac daray cashmere ayaa ah inay tahay kaashmer macmal ah, marka waxaa loo yaqaan cashmere, ma ahan timo wan. Cashmere uma qaalisan sida timaha wan, laakiin waxay leedahay saameyn kuleyl wanaagsan, oo aan ka yarayn timaha wan. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha dharka. Waa xulashada isticmaaleyaal badan si ay u habeeyaan Hoodie. Sidoo kale waa moodada in la diiriyo.
Dharka dharka caadada ah - maro cudbi ah oo saafi ah
Suufka saafiga ahi wuxuu ka samaysan yahay faybar cudbi ah. Fiber suufku wuxuu leeyahay hygroscopicity wanaagsan, shaqeyn qaboojin heer sare ah, dhuuqi kara dhididka oo maqaarka ka dhigi kara mid cusub. Dharka laga sameeyay suufka saafiga ah waa kuwo aad u jilicsan oo raaxo leh. Dharka suufka ah ee saafiga ahi badanaa way ku qallalan yihiin taabashada, miisaankoodu waa yar yahay, waxayna leeyihiin hawo fiican. Waxay ku dareemaan qabow jidhka waxayna ku habboon yihiin samaynta dharka xagaaga. Si kastaba ha noqotee, dharka suufka saafiga ah ayaa leh mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn, kuwaas oo ah, dhidid dhidid iyo hawo qaadasho. Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah inay fududahay in la duuddubo.
Dhar khaas ah oo loogu talagalay funaanad - dhogorta maqaarka
Dharka Polar waa nooc ka mid ah dharka la tolay. Waa qaab-dhismeed yar-yar oo loo yaqaan 'Yuanbao', oo lagu dhejiyay mashiin wareegsan oo ballaadhan. Ka dib markii la tolo, dharka cawl ayaa marka hore la midabeeyaa, ka dibna waxaa lagu farsameeyaa geedi socodyo kala duwan oo dhammaystiran oo adag sida seexashada, kaararka, xiirashada iyo gogosha. Dhinaca hore ee marada waa la cadeeyay, hadhuudhka ruxmayaana waa mid jilicsan oo cufan, mana fududa in la daadiyo dhogorta iyo kaniiniga, dhinaca dambena waa ku yar tahay iyo xitaa, Short villi, cufnaan cad iyo jilicsanaan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay guud ahaan waa caag, dareemo jilicsan.
Saddexda nooc ee kor ku xusan ee dharka Hoodie ayaa ah dhidid dhidid fiican leh iyo dhar neefsasho u leh hoodies la habeeyay; wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan xulashada dharka dharka hoodies ee la habeeyay iyo saaxiibbada hoodies-ga la habeeyay, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha khadka tooska ah ee Club Club.
Suuf khafiif ah oo daboolan ayaa laga sameeyay 50% fiber-ka polyesterka iyo 50% cudbi. Waa laalaabkeeda u adkaysta oo xirta u adkaysta. Waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan iyo xasilooni cabbir leh. Ma fududa in la shubo iyo koronto joogto ah. Dhar isku dhafan, waa dharka ka sii qaro weyn, is haysta. Waa la gashan karaa ragga iyo dumarkaba. Waxa kale oo aad astaysto qaabka, midabka iyo astaanta.
Isticmaalka badeecada: xayeysiinta, Hoodie, dharka kooxda, habeynta shaqsiyeed, iwm, ayaa habeyn kara midabka, qaabka, astaanta.
Nooca Bixinta: Adeegga OEM Meesha Asalka: Jiangxi, Shiinaha
Magaca Magaca: PINGYANGYU Lambarka Qaabka: PY-WW003
Nooca Dharka: Suufka isku darka Muuqaalka: DEGDEG qalalan, Anti-pilling, Anti-Dhimista, Iyadoo aan cap
Waxyaabaha: 50% Polyester，50% Farsamada cudbiga: daabacan
Naqshadeynta: Xilliga safka: Dayrta
Qaabka: Dhererka Dharka Casriga ah: Qaarkale Qaabka Nooca: Qaabka Sleeve Adag: Kuwa kale
Koolar: V-qoorta Miisaanka: 350g
Length Sleeve (cm): 7 maalmood oo buuxa oo amarka ah waqtiga hogaaminta amarka: Taageerada
Magaca badeecada: Dhar dhicis khaas ah oo jilicsan oo qoorta ah Nooca Badeecadda Nooca: haweenka dhididka
Erayoxul: gabdhaha dhididka weyn Gender: Girl Lady Women
Logo: Nooca Daabacaadda Logo Nooca: Sababta Xirashada
Shayga: OEM Adeegga Cabbirka Macaamiisha: Cabbirka Khaaska ah
Adeeg: Faahfaahinta OEM ODM Sharaxaadda: Naqshadeynta Gaarka ah ee Loo Sameeyay
J: Haa, Abuuritaankeena Macaamiilku wuxuu leeyahay wax ka badan 5 sano oo khibrad ah oo la shaqeynaya suuqyada moodada Yurub iyo Ameerika ee qaabeynta, horumarka iyo wax soo saarka.
S: Ku saabsan cabbirka iyo midabka.
J: Aqbal aqbalida.
S: Waa maxay waqtiga hogaaminta caalamiga ah ee bixinta dalabku?
J: Wax soosaar yar: 5-7 maalmood Wax soosaar ballaaran: 7-15 maalmood ama ku tiirsan qty-gaaga.
A: Alaab aad u fiican (naqshad gaar ah, mashiinka daabacaadda hore, xakamaynta tayada adag) Warshad
iibinta tooska ah (Qiimaha wanaagsan ee tartanka ah) Adeeg weyn (OEM, ODM, salesser-ka kadib, bixinta degdega ah) La-tashiga ganacsiga xirfadlayaal ah.
Hore: Astaanta Midabka Caadiga ah Rew Neck Women Sweatshirt PY-WH001
Xiga: Drawstring Thicken Long Sleeve Women'S Hoodie PY-WW004
Dabacsan Oo Isku Jilbaaban Kala Bixinta Dumarka Dheer ...
Daabacaadda Loose Trend Guga Haweenka Hoodie PY-WW002
Drawstring Thicken Long darafta Women'S Ho ...